Faaidooyinka Caafimaad Ee Ku Duugan Basasha - Daryeel Magazine
Faaidooyinka Caafimaad Ee Ku Duugan Basasha
Cilmi-baadhisyo badan ayaa bedka soo dhigay in cunista basasho faaido badan oo caafimaad ku lammaan yihiin, inkastoo ay qadhmuunayso urta afka, haddana waxay daraasadahaasi soo jeediyeen in qofku ka cuno xaddi ku filan, sidaa daraadeed haddii aanu qofku hore u cuni jirin basasha, waxa hubaal ah inuu cuni doono, hadduu akhriyo faa’iidooyinkan daryeelmagazine.com ay hoos ku xusayso.
Waxay ka shaqaysiisa hab-dhiska difaaca (Immunity): Maadada Phytochemicals ee laga helo basasha waxay jidhka ku badisaa Vitamin C, kaasoo u wanaagsan hab-dhiska difaaca cudurrada ee jidhk, qofka basal dheellitiran cunana ee cuntada ku darsada waxa uu si fiican isaga difaacaa xannuunada ay ka midka yihiin lafa-garaaca iyo hargabka.
Waxay daawaynsa hurdo la’aanta: Sidoo kale maadada Phytochemicals ee ku jirta basashu waxay qofka daawo ka tahay hurdo la’aanta. Qofku markuu cuno basasha ee uu cuntada ku darsado waxa hubaal ah oo daraasado la sameeyey sheegeen inuu hurdo fiican habeenkaas helayo. Waddamada reer galbeedka daawooyinka hurdo la’aanta waxa ka mid ah in qofka loo qoro cunista basasha.